Naw Htoo Aung, Author at Anycall Mobile
Naw Htoo Aung
ဒီနေ့မှာတော့ 2021 Chat Application တွေရဲ့ ထိပ်ပိုင်း App တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ Signal Application အကြောင်းကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Application လေးကိုတော့ Android, iOS အပြင် Window, Mac…
ဒီနေ့မှာတော့ လူတိုင်းအတွက် လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သင်လက်ရှိ Facebook အသုံးပြုနေတဲ့ တည်နေရာကို ခြေရာခံလို့မရအောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ? ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ For Android >> Setting >>…
လက်ရှိ ချိန်မှာတော့ Facebook သုံးဖို့အတွက် VPN ကျော်ပြီး သုံးနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် VPN မကျော်ဘဲ Facebook သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက် DNS ဖွင့်ပြီးသုံးတဲ့နည်းလမ်းလေးရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ MIUI 12 တင်ထားပြီး Telenor Sim…
လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတော်တော်များများ Facebook သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။ ဒီလို Social Application တစ်ခုသုံးလို့မရတာက သင့်ရဲ့ ရင်းနှီးသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်စေမှာ သေချာပါတယ်။ သင်လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ Facebook က အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာ…
Internet မလိုဘဲ စာပို့လို့ရတဲ့ Bridgefy App ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ ?
ဒီနေ့မှာတော့ လတ်တလောခေတ်စားနေတဲ့ Bridgefy Application လေးကို ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရမလဲ? ဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ ဒီ Application လေးက Internet Connection မရှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ Bluetooth Antana ကို အသုံးပြုပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စာပို့ပြီးဆက်သွယ်ဖို့…
Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ ရိုးရှင်းပြီး အသုံးဝင်တဲ့ Lite Mode ကို သုံးပြီးပြီလား?
Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ ရိုးရှင်းပြီး အသုံးဝင်တဲ့ Feature တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီထဲကမှ လူသိနည်းပြီး အသုံးဝင်တဲ့ Lite Mode Feature လေးအကြောင်းကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ ဒီ Feature လေးရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့…
သင့် Android ဖုန်း အားစားနေတယ်လို့ ခံစားနေရရင်..
ရာသီဥတုက ဆောင်းနှောင်းပိုင်း ရောက်လာပြီဆိုတော့ နေပူရှိန်ကလည်း ပိုပိုတိုးလာပါတယ်။ ဒီလိုရာသီဥတုပူလာရင် ကိုယ့်ဖုန်း Battery ကလည်း အပူရှိန်ကြောင့် အားအနည်းငယ် ပိုစားတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကိုယ်ကိုင်နေတဲ့ Android ဖုန်းက အားစားနေတယ်လို့ ခံစားနေရရင် လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲ…
iPhone မှာ Back Tap Gesture နဲ့ သီချင်းတွေကို Play/Pause ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
iOS 14 မှာပါလာတဲ့ Back Tap Gesture က အရမ်းကို အသုံးဝင်ပြီး အရမ်းလည်း Popular ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Feature လေးက iPhone 8 နဲ့ အထက်၊ iOS…
“iPhone မှာ App Ratings တွေ ပေါ်မလာအောင် ပိတ်ထားချင်ရင်”
ကိုယ့်ရဲ့ iPhone ထဲမှာ Download ဆွဲပြီး သုံးနေတဲ့ Application တွေ သေချာပေါက် ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို install လုပ်ပြီးသုံးနေတဲ့ Applicaton တွေက (အမြဲတမ်းမဟုတ်ရင်တောင်) တစ်ခါတလေ “ဒီ Application သုံးရတာ…
Android ဖုန်းတွေမှာ ဘယ် Application တွေက ကိုယ့် Camera နဲ့ Microphone ကို အသုံးပြုခွင့်ရနေလဲ?
ကျွန်တော်တို့ Android ဖုန်းတွေမှာ Privacy နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Sensors တွေအမြောက်အများ ရှိပါတယ်။ ဒီ Privacy Sensors တွေထဲကမှ ကိုယ့် Camera နဲ့ Microphone ကို ဘယ် Application…
iPhone, iPad တွေမှာ Shortcut App ကို အသုံးပြုပြီး ဓါတ်ပုံတွေကို ဘယ်လိုပေါင်းမလဲ?
ကျွန်တော်တို့ Social Media ပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို Before, After ပုံစံမျိုးလေးတင်ချင်တယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ Memories လေးတွေကို တစ်ပုံတည်းမှာပဲ တစ်စုတစ်စည်းတည်း စုပြီးတော့ ဝေဝေဆာဆာဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလေးက အကျိုးရှိစေမှာပါ။ ဒီနည်းလေးကတော့ Shortcut Application…
ကျွန်တော်တို့စိတ်က တစ်ခါတလေ ဓါတ်ပုံတွေ၊ Video တွေ နဲ့ Note တွေကို မလိုအပ်ဘူးထင်ပြီး ဖျက်လိုက်ကြတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မဖျက်လိုက်ရင် ကောင်းမှာပဲဆိုပြီး တွေးနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် မလိုအပ်တာတွေရှင်းရင်းနဲ့လိုအပ်တာတွေပါ မှားဖျက်မိသွားတဲ့အခါမျိုးကိုလည်း ကြုံဖူးတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကို မကြာခဏကြုံတွေ့လေ့ရှိတဲ့…
ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ဆီကို သတင်းတစ်ပုဒ် တက်လာတယ်ဗျ။ အခု Video တက်တဲ့အချိန်ဆို အဲ့သတင်းက တော်တော်လေးလည်း ပြန့်နေလောက်ပြီ။ ဘာသတင်းလဲဆိုတော့ “Xiaomi နဲ့ တခြား ကုမ္ပဏီ (8) ခုကို US က Ban…
Application တွေက ကိုယ့်ရဲ့ Permissions တွေကို အသုံးပြုခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒါကလည်း ကိုယ်ခွင့်ပြုမှသာ ရတာပါ။ ဒီနေ့မှာလည်း ကိုယ့် Android ဖုန်းမှာရှိတဲ့ ဘယ် Application တွေက ကိုယ့်ရဲ့ Location ကို…
လက်ရှိကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Apple ID Region က Application တွေ မစုံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခြားအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် US Region ကို ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလေးအတိုင်း ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး App Store ထဲဝင်ပါ။ ပြီးရင်တော့…